Do not ask who I am and do not ask me to remain the same. More than person, doubless like me, writes in order to have no face.
. . . Foucault. . .
လူဟာလှေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလှော်ရင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှောင်မှောင်မဲမဲကိုပဲ ကြည့်နေတယ်။ ကြောင်ကတော့လှေဦးမှာ ကျုံ့ကျုံ့ကလေးထိုင်နေတယ်။ ကြောင်ရဲ့အမွေးတွေဟာ လေတိုက်နေလို့နောက်ဘက်ကို ခပ်လန်လန်ဖြစ်နေတယ်။
ရုတ်တရက်လူနဲ့ကြောင်ရဲ့လှေပေါ်ကို စလိုက်မီးရောင်ကြီးကျလာတယ်။ ကြောင်လည်းလန့်ပြီး လူနားကို နောက်ပြန် လှည့်ပြေးလာတယ်။ လူကကြောင်ရဲ့ခေါင်းကို ခပ်ဖွဖွပွတ်ပေးလိုက်ရင်း မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး စလိုက်မီးထိုးနေတဲ့ဘက်ကို ကြည့်လိုက်တယ်။ မီးအလင်းရောင်ပြင်းလို့ မီးရောင်ကလွဲပြီး ဘာကိုမှမမြင်ရဘူး။ မီးရောင်စူးရှလို့ လူဟာ ခေါင်းကို ငုံ့လိုက်ပြီးမှ မျက်လုံးပင့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။
'' ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲလို့ မင်းတို့ကိုမမေးဘူး။ ဘယ်ကလာသလဲလို့လည်း မင်းတို့ကိုမမေးဘူး။ မင်းကြည့်နေတဲ့ အကြည့်တွေဟာ ဒီစလိုက်မီးကဖြေနေတဲ့ အဖြေတွေလိုပဲ မေးခွန်းမရှိတဲ့အဖြေတွေကို ဖြေနေတယ်။ ''
စကားသံခဏရပ်သွားတယ်။ လူရောကြောင်ပါ ဘာထပ်ကြားရမလဲဆိုပြီး တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ကြဘူး။ နားကိုတော့ စွင့်ထား ကြတယ်။ စလိုက်မီးရဲ့အလင်းရောင်ဟာ သူတို့နစ်ဦးစလုံးရဲ့ ခန္တာကိုယ်ထဲကို ဖြတ်ပြီးမှဖောက်ထွက်သွားကြတယ်။
တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာ စလိုက်မီးဆီကရော လူနဲ့ကြောင်ရောဆီကပါထွက်နေတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ စလိုက်မီးနဲ့ လူ/ကြောင် ကွက်ကွက်ကလေးပဲဖြစ်ရှိနေတဲ့လောကဖြစ်တယ်။
လူဟာ သူ့ဘေးမှာချထားတဲ့ ရိုင်ဖယ်ကိုယူပြီး စလိုက်မီးကြီးဖက်ကို ချိန်ထားလိုက်တယ်။ စလိုက်မီးကြီးဆီက လာတဲ့ အလင်းရောင်ကလွဲလို့ဘာမှထပ်ပြီးရှေ့တိုးလာတာကို လူရောကြောင်ပါမတွေ့ရဘူး။
'' အလင်းရောင်တွေထက်ပိုပြီး ဘယ်အရာကလာခြင်းကောင်းလို့လဲ။ ''
'' အလင်းရောင်တွေကလွဲလို့ ဘယ်အရာက အမှောင်တိုက်ကိုဖန်တီးနိင်လို့လဲ။ ''
'' အလင်းရောင်တွေကလွဲလို့ ဘယ်အရာကလောကကိုဖန်ဆင်းနိုင်လို့လဲ။ ''
'' အလင်းရောင်ကဖန်ဆင်းပြီး အသံထွက်ကဘဝကိုမောင်းနှင်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို မင်းတို့က နေထိုင်နေကြတာ မဟုတ်လား။ ''
'' ကြယ်တွေမှာအလင်းရောင်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့အသံထွက်ကတော့ တိတ်နေတယ်။ ''
'' မင်းတို့မှာအသံထွက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလင်းရောင်ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ ''
လူဟာ သူ့ရဲ့ရိုက်ဖယ်နဲ့ စလိုက်မီးရဲ့ဗဟိုချက်မကို သုံးချက်ပစ်လိုက်တယ်။ စလိုက်မီးကြီး ကွဲသွားမယ်လို့ လူက ထင်နေပေမယ့် ကွဲထွက်သွားတဲ့အသံကိုမကြားရဘူး။ ကျည်ဆံအသံတွေသာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဟိန်းသွားတယ်။
ကြောင်ကတော့ ယမ်းငွေ့တွေကိုရှုလိုက်ပြီး နားရွက်ကိုထောင်ထားလိုက်တယ်။
စလိုက်မီးကြီးက ထွက်လာတဲ့ အလင်းရောင်မှာ အပူရှိန်ပါနေလို့ လူနဲ့ကြောင်ရဲ့ မျက်နှာတွေဟာ မီးဟပ်တာကို ခံနေရတယ်။
'' မင်းတို့ဘယ်သူလဲလို့ မမေးဘူး။ မင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တူညီမှုတွေကိုလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး။ မင်းတို့အချင်းချင်း ကြားက ဆက်နွှယ်ချက်ကိုထုတ်ပြတာလောက် ငြီးငွေ့စရာမရှိဘူး။ ''
လူနဲ့ကြောင်ဟာတစ်ပြိုင်နက်တည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလှည့်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ အသံတိတ်သွားတယ်။ စလိုက်မီးကြီး ကတော့ ဆက်ပြီး လူနဲ့ကြောင်ကိုထိုးထားတုန်းပဲ။ စလိုက်မီးရောင်ကာနေလို့ လူနဲ့ကြောင်ဟာ ဘာကိုမှမမြင်ရဘဲ မမြင်ရတဲ့အရာကိုပဲ စူးစမ်းနေကြရတယ်။
'' တကယ်တော့ စကားလုံးတွေပါတဲ့ အသံထွက်တွေဟာ မင်းတို့ဘဝကိုဘယ်လိုမှ ကိုယ်စားမပြုနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီ အသံထွက်တွေထဲကနေ ဘဝကိုဘယ်လိုမှရှာဖွေထုတ်ယူလို့မရနိုင်ဘူး။ မင်းတို့ပြောနေတဲ့ဘဝဆိုတာ အသံထွက်ရဲ့ ဘဝပဲဖြစ်တယ်။ ''
စလိုက်မီးကြီးကနေ အလင်းရောင်တင်မကဘဲ အသံပါထွက်နေတာကို လူရောကြောင်ပါ မိနစ်အတော်ကြာမှ ရိပ်စားမိလာ ကြတယ်။ ဒီအဖြစ်ကိုလူနဲ့ကြောင်ဟာကြည့်ရင်းတွေးမိကြတယ်။လူကသက်ပြင်း ချလိုက်ပြီး ကြောင်ကအမြီးကို နစ်ချက် ယမ်းလျုက်တယ်။
လူဟာလှေဦးကိုလျှောက်လာပြီး ဘေးဘီဝဲယာကိုကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ လှေနောက်ဘက်ကို ပြန်လျှောက်လာတယ်။ လှော်တက်ကိုယူပြီး လှော်လိုက်တယ်။